Cyberpornography: အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ စွဲလမ်းမှု၊ လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ကျေနပ်မှုကိုရရှိခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည်
Cyberpornography: အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ခံစားစွဲ, လိင်စွမ်းရည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2016)
မှတ်ချက်များ YBOP: ဒီလေ့လာမှုက porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးထင်ရသောဆနျ့ကငျြတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံ:
အချိန်ပိုမိုဆက်နွယ်နေကြောင်း porn ကြည့်ရှုသုံးစွဲ အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
အချိန်ပိုမိုဆက်နွယ်နေကြောင်း porn ကြည့်ရှုသုံးစွဲ နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု
ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုအမြဲတမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်တာကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလား။ ဘယ်လိုလုပ် နောက်ထပ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခံရ နှစ်ခုလုံး နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့် နည်းသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု?
အဆိုပါဖြစ်နိုင်ခြေအဖြေ: ဒီလေ့လာမှုကိုအသုံးပြု ASEX စံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတိုင်းတာမဟုတ်, ရန် IIEF. ASEX သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းသောပုံနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) နှင့်လက်တွဲဖော်ပြုသည့်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းကိုမခွဲခြားထားပါ။ အဆိုပါ IIEF နေစဉ် သာ လိင်တက်ကြွဘာသာရပ်များအတွက်။ ဆိုလိုသည်မှာဘာသာရပ်အတော်များများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်အတွင်းသူတို့၏အော်ဂဇင်များ၊ နှိုးဆွမှုနှင့်စိုက်ထူမှုအရည်အသွေးကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ တကယ်တော့လူ ဦး ရေစာရင်းဇယားများအရလူအများစုကညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နေသည့်အလားဖြေကြသည်။
ပျမ်းမျှအသက် 25 ခဲ့သည်
လူတို့သညျကိုမှန်မှန်အသုံးပြုသော porn ၏ 90%
ဘာသာရပ်များ၏ ၃၅% သာအတူတကွနေထိုင်ကြသည် (၃၃% သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝ၊ ၃၀% သည်ချိန်းတွေ့သူများဖြစ်သည်)
porn သုံးနေစဉ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏ သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စိုက်ထူခံစားရသည်။ porn-သွေးဆောင် ED ဆုံးရှုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့သူယောက်ျားသာလျှင်အလွန်ခဲပြုပါ ဒစ်ဂျစ်တယ် porn နှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း (အံ့သြလောက်အောင်အလုံအလောက်ရှိသော်လည်းအနည်းငယ်သည်ထိုအလုပ်မဖြစ်သောဖြစ်လာသည်) ။ အသုံးပြုသူအများစုသည်မိမိတို့နှစ်သက်ရာများဖြစ်ပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသတိမပြုမိကြပါ၊
ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ် porn အသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်သတိထားမိကြောင်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကဖန်သားပြင်များ၊ fetishes များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်လိင်ရန်။ ASEX ၏စမ်းသပ်မှု (ဤသုတေသနအဖွဲ့မှအသုံးပြုသော) သည်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာကျားမခွဲစိတ်မှုများကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သာပူးပေါင်းလိင်မှ။ ဒီသုတေသနအဖွဲ့ကဒီလေ့လာမှုမှာမလုပ်ခဲ့ဘူး။ (စာရေးသူနှင့်စာအဆက်အသွယ်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ )
ဤသည်ကိုလည်းထိုအဘာသာရပ်များသတင်းပို့အမည်ရ, အသိသာ Anomaly ကရှင်းပြသည် အနိမ့် “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု” - ထိုမေးခွန်းကိုလည်းမေးခွန်းတစ်ခုပေးသည့်အခါ ကိုပြု ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသတ်မှတ်။ ယနေ့ porn porn သုံးစွဲသူများသည်မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်များနှင့်အတူအော်ဂဇင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သူများနှင့်ပါးစပ်ရောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍“ ထုံထိုင်းနေသည့်ခံစားမှု” ဟုသတင်းပို့ကြသည်။ အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများ link ကိုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိထိုအလေ့လာမှုများ၏3porn ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သရုပ်ပြ ဖြစ်စေတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ပါဝင်သူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ Grubbs CPUI မှသက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်
ဒီလေ့လာမှုက Grubbs ရဲ့ CPUI တိုင်းတာတဲ့အတိုင်းညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဟာကြည့်ရှုသူအရေအတွက်ပမာဏနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Joshua Grubbs လေ့လာချက် (“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများ”) နှင့် ပတ်သတ်၍ ဆောင်းပါးအတော်များများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုပမာဏရှိသည်ဟုဆိုကြသည် သက်ဆိုင်တဲ့ အဆိုပါ CPUI အပေါ်အပေါ်ရမှတ်ရန်။ ဤသည်နှင့်အခြားဟာရိပ်မိစွဲလေ့လာမှုများပတျဝနျးကငျြတောင်းဆိုမှုများအားဖြင့် debunked ပြီ ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု.
နောက်ခံအနည်းငယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Grubbs သည် CPUI ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်းလွှာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Grubbs ကသူ၏အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာကို“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းပုံစံအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ဒီနေရာမှာပိုပြီး) ။ ညစ်ညမ်းသောခံစားမှုအပါအ ၀ င်မည်သည့်စွဲလမ်းမှုအတွက်မဆို“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” စမ်းသပ်မှုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုမရှိပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ CPUI-1 ၏မေးခွန်း ၁-၆ သည်ဆေးစွဲမှုအားလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်လက္ခဏာများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်, "အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သည်မေးခွန်း ၁-၆ (Compulsivity & Access Efforts) နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုအရအသုံးပြုသော porn ပမာဏသည်မေးခွန်းများ ၁-၆ နှင့်ခိုင်မာစွာဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်းမေးခွန်း ၇-၉ နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသော porn ပမာဏသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အားကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရှက်နှင့်အပြစ်ရှိတယ် porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်မဆိုင်ပါဘူးရှိသည်။ တ ဦး တည်းနီးကပ်စွာကြည့်တဲ့အခါမှာအယူအဆအဖြစ် "ရိပ်မိစွဲ" တိုတောင်း၌။
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2016 Nov;19(11):649-655.
အင်တာနက်ကိုတဆင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပါအဝင်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များ, အလွန်အမင်း variable ကိုဖြစ်ကြသည်လျှင်ပင်ယခုတစ်ဘုံလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ cyberpornography အချိန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့မှတဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်, (ဆိုလိုသည်မှာရိပ်မိ compulsive, access ကိုမှကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းဆီသို့ဒုက္ခဆင်းရဲ) cyberpornography မှရိပ်မိစွဲလမ်းနှစ်ခြေလှမ်း sequential ဖျန်ဖြေမော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့် တစ်စက္ကန့်ခြေလှမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, မလှူနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း) အတွက်အတူ။ ဤရွေ့ကား differential ကိုအသင်းအဖွဲ့များကိုလည်းယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုဖြတ်ပြီးမော်ဒယ်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို အသုံးပြု. ကျား, မတစ်လျှောက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ရပ်ရွာထဲကနေ 832 အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကနမူနာ Self-အစီရင်ခံစာအွန်လိုင်းမေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ရလဒ်များ 51 အမျိုးသမီးများ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ယောက်ျား၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းကအင်တာနက်ကိုတဆင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့ကြောင်းညွှန်ပြ။ Path ကို cyberpornography အချိန်အသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိစွဲလမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောသွယ်ဝိုက်ရှုပ်ထွေးအသင်းအဖွဲ့များပြသလေ့လာဆန်းစစ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကျင်းပအသင်းအဖွဲ့များဤပုံစံများ။
FULL ဆန်းစစ်ချက် FROM မှ
ပထမဦးစွာ cyberpornography မှရိပ်မိစွဲလမ်းနှင့်ယေဘုယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်ထိန်းချုပ်လျှင်ပင်, cyberpornography အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နျြရစျ။ ဒီအနုတ်လက္ခဏာကိုတိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့သေးငယ်တဲ့ပြင်းအား၏ခဲ့သော်လည်း cyberpornography ကြည့်ရှုသုံးစွဲအချိန်အောက်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတစ်ခုကြံ့ခိုင်ခန့်မှန်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
KEYWORDS: စွဲ; cyberpornography; ကျား, မ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု